विपणन विशेष गुण विशेषज्ञ सुझावहरू विशेष खोजहरू
घर » मार्केट अनोखा गुण विशेषज्ञ युक्तिहरु
पोस्ट अप्रिल 30, 2016
In प्रेस, मार्केट अनोखा गुणहरू
मार्केट अनोखा गुण विशेषज्ञ युक्तिहरु2016-04-302018-10-20https://specialfinds.com/wp-content/uploads/2016/07/SpecialFindsLogo-1.pngविशेष खोजहरूhttps://specialfinds.com/wp-content/uploads/2016/04/bim-logo-1.jpg200px200px
ब्रान्डा थाम्सनले बुटवल अचल सम्पत्ति एजेन्सीको मालिक, विशेष उत्तरी "क्यारिरिनाका पर्वतहरूमा" भेट्टाउँछ ... "। जे भए पनि गुणहरू तिनले बेच्न मन पराउँछन्, तिनको एजेन्सी साँच्चिकै एक-एक-प्रकार हो, धेरै पात्रसँग विशेष गुणहरूमा विशेषता फोकससँग। बिल कोपेटिच संग यो साक्षात्कार मा, ब्रेंडा अद्वितीय गुणहरु मार्केटिंग को लागि उनको अद्वितीय विपणन दृष्टिकोण मा चर्चा गर्दछ।
बिल: ब्रान्डा, तपाईंको कथा साझेदारी गर्नको लागि आज यहाँ। तपाईंले अचल सम्पत्ति उद्योगमा साँचो विशेषता सिर्जना गर्नुभएको छ - अनन्य गुणहरू मार्केटिङ गर्नुहोस् जुन तपाईंले "विशेष ... फेला पार्नुहुन्छ" मा कल गर्नुहुन्छ। विशेष को रूप मा के रूप मा योग्य छ "खोज्नुहोस ..."?
ब्रान्डा: एक विशेष "खोज्नुहोस् ..." महंगा हुनु हुँदैन; यो केवल यसको आफ्नै अनूठा चरित्र हुनु पर्छ। हामीले सबै भूमिगत घरहरू सूचीबद्ध बार्न्समा राखेका छौं, भित्री फ्रान्सेली पनि।
बिल: मलाई थाहा छ तपाईं North Carolina पर्वतमा एसिहेभिले, एनसी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। तपाईं कति भौगोलिक क्षेत्रमा कभर हुनुहुन्छ?
ब्रान्डा: हामी अहिले एस्हेभेलबाट लगभग दुई घन्टा भित्र एक क्षेत्र लुकाइरहेछौँ। जबसम्म मलाई महसुस गर्छु हामी राम्रोसँग हाम्रो ग्राहकको सेवा गर्न सक्दछौं, म सूची लिनेछु। म अहिले प्रक्रियामा हुदैछ कि एक सूची प्रविष्टि गर्ने दुई घण्टा बाँकी छ। यो एक सानो घर हो। मैले यसलाई "Duality - A लक्जरी क्याम्पिंग कॉटेज" नाम दिए। तपाईंसँग हरेक लक्जरी सुविधा छ तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ; यो पोलियो र तारमा आन्तरिक छ, तर उपयोगिताहरू अहिले जडान भएका छन्।
बिल: के तपाईले पूरै ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि अनन्य गुणहरू मार्केटमा?
ब्रान्डा: सबैभन्दा पहिले, म स्वामित्व भएको हरेक घर, मैले यसको विशिष्टताको कारण खरिद गरे; दोस्रो, न्यूयर्क स्टक एक्सचेंजको लागि मार्केटिंगको पूर्व निदेशकको रूपमा, म आफ्नो मार्केटिङ विशेषज्ञता प्रयोग गर्न चाहन्छु कि केहि रोचक बजारमा। मैले ठूलो फ्रान्सेलीकृत अचल सम्पत्ति कम्पनीहरूसँग सम्बद्ध कुराकानी सुरु गरें। ती पारंपरिक फर्महरूमा, ठूलो वा सानो, सबैले पाई - मुख्यतः कुकी कटर घरहरूको एउटै टुक्राको लागि प्रतिस्पर्धा गर्छन्। चूंकि यो प्रायः एउटा घरबाट अर्को घर अलग गर्न गाह्रो थियो, म तिनीहरूलाई मार्केटिंग गर्न उत्साहित हुन सक्दिन। तथापि, हुन सक्छ कि घरको बारेमा धेरै उत्साहित हुन्थ्यो जुन धेरै चरित्र थियो। म दिनभरि ती घरहरू बेच्न सक्छु; यो मेरो लागि रमाइलो थियो, र म ती विशेषताहरु चमक बनाउन को लागि मार्केटिंग विशेषज्ञता थियो।
एकै समयमा, मलाई एक पागल, ड्राइभिङ्ग चासो मेरो कविताको आवाज प्रयोग गर्न चाहियो, त्यसैले मैले मेरो कविता, मेरो मार्केटिंग विशेषज्ञता र असामान्य गुणहरूको लागि प्रेमलाई संयुक्त रुपमा राखेको छु र मेरो कम्पनी, विशेष "भेटिन्छ ..." ... को लागि अद्वितीय क्यारेक्टरको गुण ती छनौटहरू साधारणबाट बाहिर छन।
बिल: त्यहाँ केही सामान्य प्रश्नहरू छन् कि विक्रेताहरूले तिनीहरूको असामान्य सम्पत्ति बेच्न चाहने बेलामा?
ब्रान्डा: तिनीहरू जान्न चाहन्छु कि म यो हरेक एजेन्ट भन्दा भिन्न छ र मेरो जवाफ हो सबै। म सम्पत्तिमा "जीवन" ल्याउनमा ध्यान केन्द्रित गर्दछु। म यो वर्णन गर्दछ कि एक खरीदार "मानसिक" महसूस गर्न सक्छ कि यो घर मा बाँच्न मनपर्ने महसुस गर्न सक्छ। मैले मेरो विज्ञापनमा धेरै सनसनी ल्याएँ - तपाईले के देख्नुहुन्छ - महारानी रंगको फिसल; तपाईंले के सुन्नुभएको छ - दूरीमा एक ट्रेन सील तपाईले गन्ध गर्नुहुन्छ - ताजा मुकुट घास; तपाई कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ - कूल स्लेट फर्श। म मानसिक रूपान्तरण खरिदकर्ताहरूलाई मेरो विज्ञापन जहाँ जहाँ तिनीहरूले पढ्नबाट सम्पत्तीमा भावनात्मक विज्ञापन प्रयोग गर्दछ। म एक खरीदारलाई घरको अंश बन्छ जस्तो कस्तो महसुस गर्न चाहानुहुन्छ - यो घर बन्छ।
बिल: के यसले यी विशेष र अनन्य गुणहरू तपाईलाई सूचीबद्ध गर्न लामो समय लिन सक्छ?
ब्रान्डा: राम्रो तरिकाले मार्केट गरिएको यो अब अन्य गुणहरूको तुलनामा असामान्य गुणहरू बेचन गर्न अबसम्म लिनु हुँदैन। विशेष "फेला पर्यो ..." प्राय: अधिक विशिष्ट गुणहरू भन्दा छिटो बेच्छ, किनकि दर्शकहरू राम्रोसँग परिभाषित छन्। हाम्रो कम्पनीको नामबाट, खरिदहरूले जान्दछन् कि हामी केवल विशेष "फेला पार्छ ..." लिन्छौं। तिनीहरू, बारीमा, उनीहरूको विशेष खोजी "खोजी गर्नुहोस् ..."। हामी दुई साथसाथै र विवाहको काम गर्दछौं!
खरिदहरू मलाई केही क्यारेक्टरसँग केहि फेला पार्न आए। कसैले कल गर्न र भन्न सक्छ कि उनीहरूको ऐतिहासिक घर हुनैपर्छ, र यो धेरै वर्ष पुरानो छ, र यो आफ्नो दादीको घर जस्तै देखिन्छ। यसैले उनीहरूले यो ऐतिहासिक घरको वर्णन गर्नेछन्, र यदि दस भन्दा बाहिर नौ चोटि सोध्छन् भने, "यदि मैले उत्कृष्ट अनुहारको पर्वतमा एक अल्ट्रा-आधुनिक घर वा एक लग घर फेला पार्न सक्दें भने के तपाईं विचार गर्नुहुनेछ? "उनीहरूले भन्नेछन्," पक्कै, तिनीहरू त्यस्ता सम्पत्तिलाई माया गर्छिन् "! अन्ततः, एक खरीदार एक गुण खोज्दै छ, विशेषताहरु जुन आफ्नो व्यक्तित्वको केहि भाग संग बधाई छ ... एक राम्रो भाग महसुस गर्दछ कि एक भाग।
बिल: म यी गुणहरू वर्णन गर्दै बाटोको साथ कल्पना गर्नेछु, यी प्रायः लक्जरी गुणहरू हुन्।
ब्रान्डा: होइन, मूल्य फरक छैन। प्रत्येक सम्पत्तिलाई यसको आफ्नै विशिष्ट चरित्र चाहिन्छ। हामी दुवै उच्च उच्च अन्त लिस्टिङ र खरीददारहरू आकर्षित गर्न चाहन्छौं, तर म साना साना कोटाहरू मार्केटिङको बारेमा उत्साहित छु, किनकि म ठूला सम्पदाहरूको मार्केटिंग गर्दछु।
बिल: Brenda, यो लपेट गर्नको लागि, एक अद्वितीय सम्पत्ति को विक्रेताले सबैभन्दा उचित चीजहरू के उचित मूल्य मा सफलतापूर्वक बिक्री गर्न र उत्तम मूल्यको लागि के गर्न आवश्यक छ?
ब्रान्डा: पहिलो, यो चिन्ता मूल्य बेच्न केहि अनोखी हुनाले - केहि जो कोहीसँग छैन! यी अद्वितीय विशेषताहरू देखाउन आवश्यक चरणहरू लिनुहोस्। समय र पैसा मार्केटिङ अनगिन्ति गुणहरू गैर-अद्वितीय सम्पत्ति खरीददारहरूलाई बर्बाद नगर्नुहोस्। महान शर्त मा सम्पत्ति छ, र यसको ख्याल राख्नुहोस्। यसलाई कुनै पनि क्षणमा देखाउन इच्छुक हुनुहोस्। यसको मूल्य र साथै तपाईं सक्नुहुन्छ। जब तपाइँ एक खरीदार प्राप्त गर्दा सार्न तयार हुनुहोस्, किनकि एक अनूठो खरीदार सँगै आउँछ, त्यहाँ उनीहरूको घर खोज्न सकिने 10 नहुन सक्छ; त्यहाँ केवल एक हुन सक्छ।
अन्य Brenda Thompson र विशेष "फेला पार्नुहोस् ..." को बारेमा थिच्नुहोस्
Brenda Thompson, Asheville रियाल्टार® ले खरीदारहरूलाई विशेष गुणहरू खोज्न मद्दत गर्दछप्रेस
स्थायी जीवन | भूमिगत घरहरूमार्केट अनोखा गुणहरू